Minecraft: makore gumi nerimwe ekubudirira kweichi chiSweden kusimudzira | Linux Vakapindwa muropa
Minecraft Zvakatanga sekukudziridza kwakaderera uko kwakabva kuSweden. Mutambo wevhidhiyo wakatsanangura mifananidzo ingaratidzika sedanho rekudzokera kumashure, asi anga ari chikamu chekiyi yekubudirira kwayo. Iyo yakavakirwa pakuvaka machubhu, uye chokwadi ndechekuti inotsigira kuita zvinhu zvakawanda, kubva pakuvaka zvakasununguka, kuongorora, nezvimwe.
Mojang akagadzirawo chinyorwa chakatsaurirwa kudzidzo izvo zvakachinja mamwe makirasi. Uye nedanho rega rega ravakatora, vanga vachikohwa zvakanyanya kubudirira. Parizvino mamirioni evatambi anotamba pamapuratifomu akasiyana, senge Android, Windows, Linux, nezvimwe. Muchokwadi, inotova neanopfuura mamirioni mazana maviri emakopi akatengeswa, ichiiita imwe yemitambo yemavhidhiyo inotengeswa zvakanyanya.
Markus "Notch" Persson Yakanga iri mugadziri wayo, uyo aizo gadzira kambani yeMojan kuseri kwemutambo uyu wevhidhiyo. Nekuda kwekubudirira kwake, akatengesa kambani uye ave chikamu cheMicrosoft, nekutenga kunokosha mabhiriyoni maviri nezviuru zvemadhora. Uye icho chimiro chinoburitsa pachena kukunda kukuru kwekambani iyi.
Uye chinhu chakakosha ndechekuti hairegi kukura. Kune vashoma uye vazhinji vashandisi muMinecraft. Muchokwadi, ichi chiitiko chitsva chekupfuura makopi ese mazana maviri emamiriyoni yakawanikwa chete makore mana mushure mekunge yasvika zana remamiriyoni kumashure mu4.Chimwe chinhu chinopa pfungwa yekugona kwekukura. Muchokwadi, papuratifomu yeGoogle yeYouTube, Minecraft ndeimwe yemitambo inounganidza kushanya kwakawanda kwemavhidhiyo ayo.
Uye zvakare, ivo vatogadzirira nhau, dzauchanyatso ziva. Musi waMay 26 zita racho richaonekwa Minecraft Pevhu. Chinhu chinosuwisa ndechekuti sezvo vari veMicrosoft, haizove nerutsigiro rweLinux, sezvazvakaitika nemazita epfuura. Naizvozvo, iwe haugone kunakidzwa nazvo. Zvinotaridza kuti Microsoft "inoda Linux" kana ichifarira uye hapana chimwe chinhu ... Naizvozvo, kuti unakirwe nayo, uchafanirwa kushandisa Waini kana imwe yekushambadzira vhidhiyo mutambo wevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Minecraft: gumi nerimwe makore akabudirira eiyi budiriro yeSweden